दूधमा तर मार्ने तत्वले भिडाएर तरंग निकाले, शिव कोइराला ‘ज्वाला’ नेकपासम्बद्ध खेलकुद महासंघका सहसंयोजक « हाम्रो ईकोनोमी
एकताको एक वर्षपछि जनसंगठन भागबण्डाको क्रममा नेकपाभित्र निक्कै माथापच्ची चल्यो । पूर्वएमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल नेतृत्वको खेलक्ुद महासंघ प्रारम्भिक सूचीमा पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा थियो । तर, गुट सन्तुलनका क्रममा खेलकुद मोर्चा पुरुषोत्तमकै पोल्टामा गयो र पूर्वमाओवादी केन्द्रसम्बद्ध खेलकुद महासंघका अध्यक्ष शिव कोइराला ‘ज्वाला’ सहसंयोजक भए । यो प्रक्रियाले धेरैजसो जनसंगठनमा असहमति देखियो, खेलकुदमा पनि त्यस्तै भयो । वाइसिएल पृष्ठभूमिका ‘ज्वाला’ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको हार्डकोर टिमभित्रका मानिन्छन् । सैन्य पृष्ठभूमि हुँदै शान्ति प्रक्रियालगत्तै काठमाडौंको वाइसिएल नेतृत्व गरेका उनी पहिल्यैदेखि खेलाडी हुन्, तेक्वान्दोका । अहिले पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत नेपाल तेक्वान्दो संघमा अध्यक्ष छन् ।
० जनसंगठनबीचको एकता कति न्यायोचित भयो ?
– न्याय र अन्यायतिर अहिले जानु उचित छैन । उस्तै क्षमताका मान्छेलाई तल–माथि पारेर राख्नुपर्ने बाध्यता थियो ÷छ । यसले लिने आगामी कार्यदिशा, संगठन विस्तारका योजनालगायत सन्दर्भमा संयोजक र सहसंयोजक भएका छौँ । केही महिनामा आफ्नै कार्यकर्ताले बनाइदिएर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव बन्ने सिष्टम लागु हुन्छ । यो अन्तरिम व्यवस्था हो । अब नेताले बोकिदिएर होइन, आ–आफैँ स्थापित हुनुपर्छ दुई पार्टी अब एक भइसके । हिजो को माओवादी र को एमाले थियो भन्ने तुष पालियो भने एकता भत्किन समय लाग्दैन ।
० तपाईंको संयोजकका रुपमा चर्चा थियो तर सहसंयोजकमा खुम्चिनुपर्दा निरुत्साहित हुने अवस्था कत्तिको छ ?
– म अध्यक्षबाट झरेर सहसंयोजक भएकोमा पनि गर्व गर्छु । किनभने, ऐतिहासिक एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा मैले वा हामीले निश्चित भूमिका त पायौँ नि । सदस्यमात्रै बनाइएको भए पनि स्वीकार्नुपथ्र्यो । अब जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्छु भन्ने कुराचाहिँ मुख्य हो । संयोजकका रुपमा सिनियर कमरेड आउनुभएको छ । उहाँले राजनीति गर्न थाल्दा म भर्खर जन्मिएको रहेछु । बुबाजस्तो मान्छे हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँबाट मैले धेरै कुरा सिक्न पाउने भएँ भनेर उत्साहित छु । उहाँले हामी छोरा पुस्ता हुँदै नाति पुस्तालाई स्थापित गर्ने, नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरण गर्ने काम गर्नुहुन्छ भन्नेमा पूरै विश्वस्त छु ।
० तपाईंले पनि ‘कलौ थालमा हाले पनि, टपरीमा हाले पनि कलौ नै हो’ भनेर असन्तुष्टि पोख्नुभएको थियो । किन त ?
– दुई पार्टीका पूर्वसंयोजकहरुलाई नै संयोजक र सहसंयोजक बनाउने नीति बन्यो । तर, विद्यार्थीमा रञ्जित तामाङ त पाँच जना उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै उनीमुन्तिर अर्को संगठनका महासचिवको अण्डरमा आए । विद्यार्थीको केशले समाजिक सञ्जालमा भूमिका निर्वाह ग¥यो । पार्टीमा युवा र विद्यार्थीभन्दा अन्य सशक्त संगठन प्नि छन् । तर, विद्यार्थीको अलि बढी चर्चा चल्ने गर्दछ । सहसंयोजक बनिसकेपछि महासचिवबाट बन्नु वा अध्यक्ष बन्नुसँग अर्थ राख्दैन भन्ने मानेमा त्यसो भनेको हुँ । अब यी गुनासा सामाजिक सञ्जालतिर नझुल्काऔं भनेर मेरो लेबलका साथीहरुलाई सतर्क गराउन मात्र खोजेको हुँ ।
० पार्टी एकता भएको एक वर्षसम्म सांगठानिक गतिविधि ठप्प छ । यस्तो तालले जनतासँग पार्टी अब कसरी जोडिन्छ ?
– कुरा यहीँ आएर बिग्रेको छ । हामीले पार्टी र नेतृत्वको सम्मान गर्ने मामिलामा जब आफूलाई दलाली प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउँछौं, समस्या रहन्छ । पार्टी सचिवालय, कार्यविभाजनको सन्दर्भ होस् वा कसैलाई दोहोरो–तेहेरो जिम्मेवारी अनि कुनै साथीलाई जिम्मेवारविहिन बनाएको अवस्था छ । यी थुप्रै प्रक्रियाले पार्टी गलत दिशातर्फ गएको छ । एकता पनि यिनै नेताले गरे, जो हाम्रो सामथ्र्यले भेट्ने कुरा होइन । उनीहरुको प्रशंसा गर्न पनि बाँकी राख्नु हुँदैन ।
तर, जुन ढिलाई भएको छ, त्यसले केपी ओली र प्रचण्डको आगामी राजनीतिक यात्रालाई असर गर्छ । उहाँहरुले अबको १०÷१५ वर्ष राजनीति गर्ने हो । यसर्थ उहाँहरुमा भएको कमजोरीलाई सचेततापूर्वक आलोचना गर्ने चेत युवामा हुनुपर्छ । हामीले नेताहरुको दलाली र चाकडी हैन, स्वस्थ आलोचनाको विधिबाट सच्याएर अगाडि बढ्ने शैली अबलम्बन गर्नु जरुरी छ । व्यक्तिको देवत्वकरण गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलन समृद्ध हुँदैन । निर्णयहरु द्रूततर गतिमा हुनुपर्छ । अब प्रचण्ड वा केपी ओली र सचिवालयले गर्ने निर्णयहरु थेरै मात्र बाँकी छ । प्रदेश र जिल्ला कमिटी बनिसकेका छन् ।
० हरेक काममा भइरहेका ढिलाईको कारक केलाई मान्नुहुन्छ ?
– राजनीतिमा ढिलाई म कति पावरमा पुग्छु भन्ने सन्दर्भको मापनले हुने हो । सचिवालय निर्माण भयो एउटा प्रक्रियामा । उसले स्थायी कमिटी निर्माण ग¥यो । जिम्मेवारी बाँड्ने सन्दर्भमा पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेभित्र थुप्रै प्रवृत्ति छन् । जिम्मेवारी बाँडफाँडको सवालमा पनि मेरो पोल्टामा कति प¥यो भन्ने दरिद्र मानसिकताका कारण ढिलाइ भएको हो ।
० प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा गएको बेला पारेर अध्यक्ष प्रचण्डले पुरानो सहमतिको कुरा झिक्दा तरंग मच्चियो । के त्यस्तो कुरा उठाउने बेला थियो र ?
– कुरा त्यही दिन मात्र उठेको होइन । त्यही दिन कसले, किन एक्स्पोज गर्ने चाहना राख्यो भन्ने कुरा हामी जान्दैनौँ । दुई नेताबीच भएका सम्झौता खारेज गरे पनि, लागु गरे पनि हामीले त्यही ढंगले बुझ्ने हो । दुई नेताले चाहेर पार्टी एकता भएको हो । त्यहाँ कुनै ऐन, नियम, कानुन र हिजोका माओले यस कालखण्डमा गएर पार्टी एकता गर भनी निर्देशन दिएका पनि थिएनन् । वस्तुगत राजनीतिलाई विश्लेषण गर्ने उहाँहरुकै जिम्मेवारी हो ।
० कथंकदाचित प्रचण्डले भन्नुभएजस्तो आधा–आधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएन भने के हुन्छ ? के फेरि पार्टी अलग अलग हुन्छ ?
– पाँच वर्षको अवधिमा स्थायी कमिटीका कोही नेताले पार्टी छोड्न सक्लान् । कोही साइड लागेर बस्लान्, भुन्भुनिएर, रन्थनिएर हिँड्लान् । तथापि कुनै टिमले, लाइनले नै पार्टी विभाजन गर्ने सम्भावना मैले देखेको छैन । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको भूमिका एक–एक जनामा होस् भन्नु मनासिव हो । तर, त्यही नाममा सबै प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुपर्छ, बोली भुइँमा झर्न नपाई कार्यान्वयन हुनुपर्छ पनि उहाँले भन्नुभएको होइन । हामी त प्रचण्डको माया र गाली उत्तिकै खाएका कार्यकर्ता हौँ । तर, उहाँको माया होस् या गाली, दुबै कुरा सकारात्मक परिणामका लागि हुने गरेको छ ।
समकालीन नेपाली राजनीतिमा यस्तो नेता पाउन मुस्किल छ । पार्टी एकताको सन्दर्भमा भएका सहमतिका कुरा पनि सकारात्मक परिणामकै निम्ति बोल्नुभएको हो । तर, दूधमा तर मार्ने केही तत्वले उहाँहरुलाई भिडाएर पार्टीलाई तरंगित बनाए । र, एकतामा भाँजो हाल्न चाहे । प्रचण्डलाई नबुझ्नेहरु, उहाँ वा उहाँको क्षमतालाई नचिन्नेहरुले सतही रुपमा गरेका टिप्पणी समयको बर्बादीमात्र हो । हामी अहिले समय बर्बाद पार्नेमा हैन, एकतालाई फलदायी बनाउने, सरकारलाई सफल बनाउने र अर्को निर्वाचनबाट अझ बढी परिणामका साथ सरकार चलाउनेतर्फ केन्द्रित छौँ ।
यदि सहमतिमा भोलि प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा भयो भने त्यसरी पनि जान सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदको भागबण्डामै अल्झिएर मूल कार्यभारलाई विषयान्तर गर्ने मनस्थिति, नियत र योजना क.प्रचण्डको छैन । उहाँले हामीलाई प्रष्टसँग भन्नुभएको छ, ‘आ–आफ्ना जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ पूरा गर्ने हो, झिनामसिना कुरामा बहस र तर्क गरेर समय खेर फाल्ने हैन ।’
० पूर्वएमालेका एकथरि नेताहरु जनताको बहुदलीय जनवादको विकल्प छैन भन्दै अभियान नै चलाउने पक्षमा देखिएका छन् । यदि त्यस्तो भयो भने के हुन्छ ?
– हामीले प्रचण्डपथ मान्दै÷छाड्दै फेरि माओवाद नै भन्याँै । पूर्वएमालेका साथीहरुले माक्र्सवाद र लेनिनवाद भन्नुभयो । जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुभयो । हामीहरुले २१ औं शताब्दीको जनवाद मान्दै यहाँ आइपुग्यौँ । अहिले पार्टी एकता भएको छ र वैचारिक मान्यताका सन्दर्भमा महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भनिएको छ । माक्र्सवाद, लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानिएको छ । यसको दार्शनिक आधार भनेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद नै हो । मूलतः सबै कम्युनिष्टहरु माक्र्सवादी, लेनिनवादी हुन् ।
परिस्थितिजन्य नीति, कार्यक्रम र रणनीतिबारे छलफल र सहमतिमा अघि बढ्न सकिन्छ । तर, त्यसो हुँदाहुँदै जवज नै चाहिन्छ, २१ औँ शताब्दीको जनवाद नै चाहिन्छ भनेर लिँडेढिपी कस्ने काम पनि यदाकदा भएको छ । ती तर्क निर्माण गर्नु भनेको पार्टी एकतामा भाँजो हाल्नु हो । महाअधिवेशनसम्म पुग्दा यिनै बिचारमध्येको एक विचार वा अर्काे नयाँ विचार सिर्जना हुने भनिएकै छ ।
बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । हिजो जे थियो, त्यहाँबाट परिवर्तन हुन नसक्ने सोचले हामी रौं उम्रेको मान्छे वा बन मान्छे बन्न जान्छौं । माक्र्सवाद परिवर्तनशील विज्ञान हो भन्ने ढंगले सोच्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । कसैले विचारमै अडिग रहेर भन्यो वा अन्तरविरोध सिर्जना गर्न भन्यो, त्यो अलग कुरा हो । तर, एकता मान्ने हो भने यस्ता लिँडेढिपी सबैले छोड्नुपर्छ ।
० नेकपासम्बद्ध युवा र खेलकुदको नाममा खुलेका संगठनमा चारीत्रिक आचारण भ्रष्ट भएका, समाजमा बद्नाम भएका डनहरुलाई भिœयाइएको भनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
– कोही हिजो गलत थियो भने ऊ सधैँ गलत भइरहनुपर्छ भन्ने होइन । सुध्रनु पर्छ । आचरण परिवर्तन हुनुपर्छ । आफूलाई सच्याएर, समाजले दिने दण्ड पूरा गरेर कोही आएको छ भने राजनीति गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । यो कसैको प्राइभेट कम्पनी होइन । प्रचण्ड वा केपी ओलीले तगारो हालेर नेकपाभित्र कोही छिर्न नपाउने भन्ने हुँदैन ।
न त शेरबहादुरले तगारो हालेर कोही कांग्रेस हुन पाउँदैन भन्ने छ । राजनीति सबैका लागि खुला क्षेत्र हो । त्यहाँभित्रको मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि मान्छेले राजनीतिक दलको सदस्यता पाउनुपर्दछ । यदि खराब प्रवृत्तिका मान्छेहरु इन्ट्री भएका भए तिनलाई कारवाही हुनुपर्छ । नेकपामा संगठित हुने युवा कम्तिमा परिवर्तनचेतले युक्त, माक्र्सवादी विचारले सम्पन्न र सांगठानिक गतिशीलताले स्फुर्त हुनु जरुरी छ, यो न्युनतम् शर्त हो । यदि कोही, कसैमा त्यसको कमी छ भने तिनलाई प्रशिक्षित गर्ने र असल कम्युनिष्ट युवाका रुपमा विकास गर्ने दायित्व हाम्रो हो, हामी गर्छौं ।
० राखेपकै कारण नेपालको खेल क्षेत्र उठ्न सकेन भन्ने टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् शरदचन्द्र शाहदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा निरन्तरतामा अगाडि बढेको छ । त्योबाहेक अरु केही हुन सकेको छैन । नेपाली राजनीतिले थुप्रै फड्को मा¥यो । राजाको शासन हुँदै बहुदलीय प्रक्रियाबाट गणतन्त्रमा आएका छौं । तर, खेलकुद परिषद्भित्र तिनै शरद्चन्द्र शाहका भूतहरु जिउँदै छन् । उनले बनाएका नीति, उनैले भर्ना गरेका मान्छे र संघहरु यथावत छन् । त्यसले कुनै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन । निरन्तरताका सवालमा भवन, मैदान बने होलान् । यो भनेको समयसँग आफूलाई घिसारेको मात्र हो । दगुर्न सकेको छैन । त्यसको जस मैले पनि लिनुपर्छ ।
खेल संघलाई बजेट दिने, विदेश पठाउने, टिकट भाडा दिनेजस्ता काममा खेलकुद परिषद् चलिरहेको छ । खेलहरु त धेरै भए । तर, खेल कस्ता भएका छन् भने, मैदानमा चप्पल लगाएर दगुर्ने, तुना छिन्ने जुत्ता, खाजाको रुपमा चिउरा र चाउचाउ । तर, गेम खेल्नुपर्ने बजेट ३५ करोडमै सकिने । हामीकहाँ गेम खेल्न गएपछि हिजोभन्दा बढी घाइते बन्ने र हिजोभन्दा बढी नजान्ने भएर फर्कने प्रबृत्ति छ । यही प्रबृत्ति जारी रहे हामी भोलि भुटानसँग पनि प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।
भूकम्प गएको चार बर्ष बितिसक्यो, दशरथ रंगशाला जस्ताको तस्तै छ । कुनै पिलर बाहिरबाट सिमेन्ट लगाएर टालिएका छन् । त्यसलाई १० फिट मुनिसम्म हालेको भन्दै बजेट निकासा गरेर खाने चलन छ । हाम्रो अगाडि १३ औं साफ गेम आउँदैछ । यही प्रक्रियाले १३ औं साफ स¥यो भने बद्नामबाहेक केही हुँदैनौं ।
० हिजो तपाईंहरुले पनि वाइसिएलका नाममा गुण्डाहरुलाई तर्साउँदै उनीहरुको काम र पेशामा हस्तक्षेप गरेको भनिन्थ्यो । नभन्दै वाइसिएल र खेलकुद महासंघका नेताहरु रातारात धनसम्पत्तिले सम्पन्न भए । के त्यो सत्य कुरा थियो ?
– राजनीतिलाई मागिखाने भाँडो बनाउनु हुँदैन । युवाहरु व्यवसायमा लाग्नुपर्दछ । हिजो वाइसिएलको काठमाडौं जिल्ला संस्थापक अध्यक्ष हुँदादेखि मैले दिने चेतना यही हो । हाम्रा काँधमा अहिले पनि राइफलका भारी बोकेर लागेको दाग छ । कतिपय साथी हिजो सिकेको युद्ध कौशललाई दुरुपयोग गरेर अनुचित काममा पनि लागे । बेलैमा तिनलाई स्वरोजगार बनाउने वा रोजगारी दिने प्रभावकारी कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो, तर अझै आएन । चन्दाले जिन्दगी चलाउनुपर्ने र चन्दादाता तर्सिएर भाग्ने, यस्तो पुरातन शैलीबाट पार्टी, संगठन र कार्यकर्ता चलाउनुहुँदैन । जनआस्थाबाट